बागलुङमा सुन किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै !::Online News Portal from State No. 4
बागलुङ, २७ साउन – डलरको भाउ तलमाथी भैरहेपछि सुनको भाउमा पनि अस्थिरता आउने गर्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारकै असरले नेपाली बजारमा केही समय देखि सुनको मूल्य बढीरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा स्थिर भएपनि नेपालका ठूला व्यवसायीको कारण मूल्य बढ्ने गरेको साना व्यवसायीको आरोप समेत छ । सुनको मूल्य बढेर ७० हजार पुगेको छ । यो क्रम बढेर ८० हजार सम्म पुग्न सक्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । सुनको मूल्य बढेकोले पसलमा किन्नेको भन्दा बेच्न आउनेको भीड लाग्न थालेको सुनचाँदी व्यवसायी संघ बागलुङका अध्यक्ष ओमबहादुर बिश्वकर्माले बताए । ‘सुनको भाउ बढेर माथी उक्लेपछि हामीले खरिद गर्न सकेका छैनौं, उपभोक्ताले पनि किन्न सक्दैनन्’ विश्वकर्माले भने, ‘पसलमा आएर किन्न भन्दा बेच्न खोज्ने धेरै छन् ।’ हरेक दिन २ केजी सम्म सुन बागलुङका व्यवसायीले बैंकबाट खरिद गर्दै आएका थिए । तर दुइ सातादेखि यो कारोवार समेत ठप्प भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आफ्नो मौज्दातमा रहेको सुन व्यवसायीलाई बेच्ने गथ्र्यो । केन्द्रीय रुपमा समेत झण्डै ७ सय केजी सुन मौज्दात रहेको बताइएको छ । बिशेषगरी साउन महिनामा सूनको मुल्य घट्ने गथ्र्यो ।
तीज लगायतको चाडपर्वका लागि नेपाली महिलाले गहना बनाउने समय भएकोले धमाधम पसलहरुमा भीड लाग्ने गरेकोमा यतिबेला सुनसान भैसकेको अर्का व्यवसायी अनिष खातीले बताए । ‘सानो पूजिबाट दैनिक खरिद गर्दै काम गरिरहेका थियौं, मुल्य बढेपछि खरिद र बिक्री समेत ठप्प भएको छ’ खातीले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा घट्दा घटेकै र बढ्दा बढेकै मूल्य पाइने भएकोले स्टक राख्ने काम पनि जोखिमको हुन्छ ।’ स्टक राखेर मूल्य घट्यो भने व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए । सुनको मूल्य नेपालको बजारले निर्धारण गर्दैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल, सुन र डलरको भाउको सन्तुलनबाट नेपाली बजारमा पनि असर पर्ने गरेको हो । नेपालीहरुको चाडपर्व शुरु हुनै लागेपनि बजारमा किनबेच नभएकोले सुनचाँदी व्यवसायी भने निरास भएका हुन् । उनीहरुले यो बर्षको चाडपर्वमा सोचेजस्तो व्यपार गर्न नसक्ने पक्का भैसकेको बिश्वकर्माले बताए । अन्तराष्ट्रिय बजारको तुलना गरेर हरेक दिन सुनचाँदी व्यवसायी संघले मूल्य निर्धारण गर्छन् । बाणिज्य बैंकले खरिद गरेर ल्याउने सुन अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य र डलरमा आउने उतारचढावका कारण बढ्ने गर्छ । खरिद गरेको मुल्यमा केही नाफा राखेर बैंकले व्यवसायीलाई सुन दिन्छन् । त्यो सुनमा व्यवसायीले पनि सामान्य मार्जिन राखेर बिक्री गर्ने चलन छ । ठूला व्यवसायीले भने सस्तोमा खरिद गरेर राखेको सुन महंगो भएको बेला बेचेर नाफा कमाउने गर्छन् ।